I-MK iphika eyokulawulwa yinkampani ebiqashwe abakwaGupta | isiZulu
I-MK iphika eyokulawulwa yinkampani ebiqashwe abakwaGupta
I-MKMVA ifuna kuphenywe amabhange
Yekani ukusola uZuma ngeyokhetho: MKMVA
Johannesburg - Umkhonto weSizwe Military Veterans Association (MKMVA) usuzichithile izinsolo zokuthi inkampani eyakha isithombe esihle emphakathini (Public Relations) ezinze eBrithani, iBell Pottinger, ibisiza lo mbutho ngezitatimende obuzenza kwabezindaba.
UMengameli weMKMVA, uKebby Maphatsoe, esitatimendeni uthe le nhlangano ayikaze yahlangana neBell Pottinger ukuze iyiqeqeshe ngokuthi iyihlaziye kanjani noma bayiqonde kanjani ipolitiki yaseNingizimu Afrika.
“Asidingi ukutshelwa noma ngabe yini ngezinto ezenzeke kuthina yinkampani yangaphandle eyakha isithombe esihle. Izinsolo eziwulolu hlobo ziyinhlamba enkulu futhi ziwukucwasa,” kusho uMaphatsoe.
Le nhlangano isho kanje ngemuva kokuvela kombiko wamaBhungane, nokuyigxenye yama-email aputshuka naziwa ngama-#GuptaLeaks.
Ngokwalo mbiko kunama-email akhombisa ukuthi izinhlangano ezifana ne-MKMVA kanye ne-ANC Youth League zibukeka zathola ukulekelelwa yiBell Pottinger emkhankasweni wazo wokungcolisa igama lalabo abagxeka umndeni wakwaGupta kanye noMengameli Jacob Zuma.
I-CEO yeBell Pottinger, uJames Henderson, ngesonto eledlule uxolisile ngomsebenzi le nkampani ewenzele abakwaGupta kanye nenkampani yabakwaGupta, i-Oakbay Investments.
Le nkampani isolwa kokugqugquzela inzondo yobuhlanga kuleli ngomsebenzi ewenzele abakwaGupta kanye noDuduzane Zuma, ongenye yamadodana kaZuma.
UMaphatsoe uthi lezi zinsolo ziyimizamo yokucekela phansi nokubukela phansi i-MKMVA.
“Asidingi abangaphandle ukuthi basitshele ukuthi sicabangeni nokuthi senzeni! Ubudlelwano bethu bamabhizinisi nezinkampani ezihlobene nomndeni wakwaGupta buyaziwa, futhi buqondile.”